Queen Mary University of London - Kudzidza in United Kingdom
inotangwa : 1785
Musakanganwa kuti kurukura Queen Mary University of London
Kunyoresa pana Queen Mary University of London
Queen Mary University of London ndeimwe UK kuti raipinda tsvakurudzo-chakabatikana dzidzo nemasangano. With kumativi 21,187 vadzidzi, 4,000 tsvimbo uye turnover pamusoro £ 300m wepagore, tiri mumwe mukuru University of London mumakoreji.
Vatinodzidzisa nokutsvakurudza kuyambuka-siyana zviri nevanhu, sayenzi evanhu, mutemo, mushonga uye dentistry, uye sayenzi mapurani. Kubva mune rokusika uye tsika dzakasiyana nharaunda yokumabvazuva London, tisu chete London yunivhesiti kukwanisa kupa zvachose Integrated 2,000-mubhedha chokugara kembasi panguva yedu Mile End musha.
Queen Mary akaita yakanakira hondo kuzvipira chemhando yepamusoro kutsvakurudza. Tava paakapiwa pfungwa iyi kuburikidza zvakanyatsorongwa arirwise yakanakisisa renyanzvi vari nokuranga avo kubva munyika yose. Zvakabuda zvikuru achangobva National tinyatsonzwisisa tsvakurudzo - the Research Excellence Pakuumbwa (neMuridzi 2014) - Ndikazvisimbisa nzvimbo yedu pamusoro chaizvo boka kutsvakurudza-akatungamirira mumayunivhesiti muUK. Yose zvayo takanga yandaipuwa 9th muUK pakati multi-fakaroti mumayunivhesiti uye 5th muUK kuti chikamu chedu 3* uye 4* tsvakurudzo outputs.
Queen Mary inopa kunoshamisa vadzidzi nekurukurirano yakanaka, rutsigiro uye yepamusoro kudzidza ruzivo, nedzidziso kwaiparirwa tsvakurudzo nyika-kutungamirira kwedu. Takavawo yashandiswa kupfuura £ 250m muzvivako zvitsva pamusoro okupedzisira nemashanu kupa vatinodzidzisa rakasiyana ekudzidza. Izvi zvinoratidzwa kwedu nguva refu kwevari mudzidzi kugutsikana. In chinonyanya ichangopfuura National Student Survey (NSS 2015), 88 muzana undergraduates dzedu vakaratidza 'kugutsikana uchitikurudzira’ nguva yavo pano, pamwe gumi nyaya pamusoro vatatu muLondon.
Rorusununguko Humanities uye Social Sciences
School of Business uye Management
School of Economics uye Finance
School of Chirungu uye Drama
School of Languages, Wemitauro Film
Iberian uye Latin America Studies
Center nokuti Commercial Law Studies
School of Politics uye International Relations
Rorusununguko Medicine uye Dentistry
Barts uye The London School of Medicine uye Dentistry
Wolfson Institute of Okudzivirira Medicine
The Center of Cell
School of Biological uye Chemical Sciences
School of Electronic Engineering uye Computer Science
School of Engineering uye Materials Science
Interdisciplinary Research Center anorapa achishandisa mitemo Materials
School of Physics uye Astronomy
Research Center Psychology
Queen Mary ane nemidzi yawo mumakoreji mana nenhoroondo: Queen Mary College, Westfield College, St Bartholomew zvaJehovha Hospital Medical College uye London Hospital Medical College.
The Mile End kembasi ndiyo nhoroondo musha Queen Mary College, rakatanga upenyu 1887 sezvo vanhu Palace, munhu philanthropic centre kupa mabvazuva Londoners vane dzidzo, zvetsika nemagariro mabasa. Queen Mary College akanga vakabvuma kuti University of London muna 1915. Westfield College rakaumbwa 1882 muna Hampstead somunhu kupayona kukoreji kuti dzidzo yevakadzi. mu 1989 Queen Mary akabatanidzwa Westfield College kuumbika Queen Mary uye Westfield College.
mu 1995, Queen Mary uye Westfield akabatanidza zvakare, nguva iyi miviri anokudzwa dzokurapwa mumakoreji, St Bartholomew zvaJehovha Hospital Medical College, dzakasimbiswa 1843, uye London Hospital Medical College, chikoro zvokurapa rokutanga neEngland, rakavakwa 1785. batanidzo ichi akasika Barts uye The London School of Medicine uye Dentistryand akauya zvekuchipatara zvokurapa uye mazino kudzidzisa Mambokadzi Mary kekutanga.
mu 2013, zita wepamutemo Queen Mary uye Westfield College, University of London akanga pamutemo rakachinjwa Queen Mary University of London kuratidza kushandiswa. Gore rino akaonawo Queen Mary vanosarudza mubayiro pachake madhigirii ayo, pamwe 2014 Vakapedza kuva wokutanga kugamuchira kwavari.
Archives The College kuti abate munhu upfumi rinonakidza zvechechi yamabhuku uye zvisingawanzoitiki rinodhindira, kudanana kubva rechi17 Century kusvikira nhasi. The mari anopa imwe kunzwisisa dzimwe nyanzvi mabasa QMUL mudonzvo uye vadzidzi kare, zvemakore vapfumi nhoroondo QMUL.
Tine wechipiri dangwe yokupona kumakuva Jewish muEngland, munhu Spanish Portuguese Jewish kumakuva kudanana kubva 1726, pakati ritenderane yedu.
The marangwanda kwaJosefa Merrick, ari Elephant Man, iri muNzvimbo School of Medicine uye Dentistry raMwari zvokurwara Museum.
The Medical College of Royal London Hospital (zvino chikamu Barts uye The London School of Medicine uye Dentistry) akanga chikoro zvokurapa yokutanga neEngland kana yakavhurwa 1785.
From 1964 kusvikira 1982 Queen Mary College akaramba reactor yayo yenyukireya, pakutanga sited pazasi Mile End Road.
Elizabeth Blackwell, haunyatsokodzeri chiremba yokutanga hadzi muUK, vakadzidziswa pana Barts Hospital Medical College mu 1850.
Sir John Vane, akavamba William Harvey Research Institute, ndiye chete kuziva sei asipurini uye zvinodhaka akafanana yabereka Migumisiro dzavo.
Sir Walter Besant raMwari 1882 nganonyorwa All Vemarudzi uye Chinoitika Men - An Impossible Story, zvokufungidzira munhu 'Palace unondifadza’ vari kumabvazuva London ne konzati dzimba, kuverenga dzimba, mufananidzo namaberere, Ndiwe chikoro uye dzidzo vanhu vemo - ichi chaiva kufemera zvevanhu Palace uye Pakatanga Queen Mary nhasi.
Unoda kurukura Queen Mary University of London ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Queen Mary University of London musi Map
Photos: Queen Mary University of London pamutemo Facebook
Queen Mary University of London wongororo
Join kukurukura pamusoro Queen Mary University of London.